Tirada Dadka ay Saamaysay Xaalad Abaareed oo ka jirta Somaliland iyo Qorshaha Xukuumadda | Somaliland Post
Home News Tirada Dadka ay Saamaysay Xaalad Abaareed oo ka jirta Somaliland iyo Qorshaha...
Tirada Dadka ay Saamaysay Xaalad Abaareed oo ka jirta Somaliland iyo Qorshaha Xukuumadda
Hargeysa (SLpost)- Guddida heer qaran ee gurmadka abaaraha Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday inay dalka ka jirto xaalad abaareed baahsan oo ay sheegeen inay saamaysay Dadka reer Guuraaga ah ee ku dhaqan gobollada dalka
Guddigu waxa ay sheegeen inay Abaartu saamaysay Dad gaadhaya 810,000 qof, isla markaana laga yaabo inay tiradaadaasi intaas ka badan karto isla markaana ay gaadho in ka badan 1.2 Milyan oo Qof.
Guddida oo dhawaan uu magacaabay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxa guddoomiye u ah madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici).
War-saxaafadeed uu ku saxeexan yahay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland, ayaa lagu faahfaahiyey baaxadda abaarta iyo tallaabooyinka guddi ahaan u qorshaysan iyo baaqyada ay dirayaan.
“Iyada oo lagu salaynayo warbixinta hordhaca ah ee NADFOR ee la xidhiidha xaaladda abaarta ayaa waxaa fadhigii 83aad ee Golaha Wasiirrada Jamhuuriyadda Somaliland uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi magacaabay Guddida Gurmadka Abaarta oo ka-hawl gashay qiimaynta xaaladda iyo dejinta qorshaha lagaga jawaabayo,” sidaas ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedka oo sidoo kale lagu faahfaahiyey tallaabooyinka ay guddi ahaan qaadeen iyo qorsheyaasha xukuumadda. “Guddida qaran ee abaarta ayaa waxay ay bilaabeen howlaha gurmadka abaarta iyaga oo qaaday tallaabooyin kala duwan kuwaasi oo kala ah:
Waxa hay’adda NADFOR diyaarisay kayd-raashin ah oo loogu talo galay dadka abaartu saamaysay,” sidaas ayaa lagu yidhi war-saxaafdeedka oo uu ku saxeexan yahay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland.
Md Saylici, guddoomiyaha Guddiga heer Qaran ee Gurmadka Abaaraha Somaliland, waxa uu intaas ku daray, “Aniga oo tix-raacaya warbixinta xaaladda abaarta, waxa aan ku dhawaaqayaa in ay dalka ka jirto xaalad abaareed oo saamaysay dhammaan gobalada dalka sida: Sool, Sanag, Togdheer, Sahil, howka Marodijex, iyo xeebta Gobolka Awdal. Qiimeynta lagu sameeyay waxyeeladda abaartu waxay si toos ah u saamaysay dad gaadhaya 810,000 oo qof oo u baahan kaalmo deg-deg ah sida biyo, cunno iyo caafimaadba, Waxana sidoo kale la filanayaa in ay saamayn doonto dad ku dhow 1,200,450 qof, afarta bilood ee soo socda.”
Md Saylici waxa uu war-saxaafadeeka ku sheegay in xukuumaddu $3 Milyan u diyaarisay Gurmad Abaaraha, waxaanu yidhi, “Haddaba si wax looga qabto xaaladdan, wax ay xukuumaddu qoondaysay kharash dhan $ 3,000,000 Milyan (Saddex Milyan oo Doolar) oo lagu talogay Raashin, biyo-dhaamis iyo kicinta ceelasha xumaaday.
Waxa aan farayaa guddiyada gurmadka abaarta ee heer gobol in ay udiyaar garoobaan wax ka qabadka xaaladda abaareed ee jirta, kaalintooda ay ka qaataan.”
Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland waxa uu baaq u diray Ganacsatada dalka, hay’adaha Qaramada Midoobay, Ururrada Caalamiga ah iyo kuwa Maxalliga ah iyo dowladaha Caalamka inay u gurmadaan Dadka Abaaruhu saameeyeen ee ku nool gobollada iyo degmooyinka dalka.
“Waxa kale oo aan ugu baaqayaa ganacsatadda reer Somaliland, qurbajooga reer Somaliland, hay’addaha caalamiga ah (UN, INGO’s iyo LNGO’s), Dowladaha caalamka iyo saaxiibada Somaliland in ay door ka qaataan gar-gaarka iyo samato-bixinta dadka ay abaartu saamaysay, inta aanay xaaladdu ka sii darin.
Haddaba, laga bilaabo maanta waxaan ku wargalinayaa in cid walba oo doonaysa inay wax ka qabato abaarta dalka ay waajib tahay inay soo marto guddida gurmadka abaarta.” Sidaas ayuu war-saxaafadeedka ku yidhi Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici).